[14 / 02 / 2020] Fangatahana lehibe avy any Eropa ho any amin'ny tranokala mpitatitra entana an-trano	58 Sivas
[14 / 02 / 2020] Ny fizotran'ny làlan-tsasatra any amin'ny tanànan'i Kocaeli City no nosedraina tamin'ny drafitra	41 Kocaeli
Andro: 7 Febroary 2020
Vidiny azo amidy amin'ny saka-saka sy sakaza
Ny maha-biby dia zava-dehibe tokoa amin'ny resaka fizarana ny fahatsapana fahatokiana. Ny hevitra fa ny zavamananaina rehetra dia sanda dia mamorona ny antsipirihany amin'ny fahazoana biby. Na izany aza, ny fahatsarana ny hanome tontolo kalitao ho an'ireo zavaboary ireo [More ...]
Tamin'ny 17 Janoary 2020, ireo mpampianatra sekoly tsy miankina dia nanomboka nandefa ny fangatahana nataon'izy ireo tany amin'ireo tanàn-dehibe lehibe tao Ankara sy Izmir, tamin'ny fiantsoan'ny Fikambanana mpampianatra sekoly tsy miankina. [More ...]
Mba hampitomboana ny saran-dàlana akaiky indrindra indrindra avy amin'ny 2.60 TL mankany 3.50 TL amin'ny fiara fitateram-bahoaka tsy miankina, IETT, metro ary tari-metrobus mandritra ny fivorian'ny ivon-tseranana momba ny fitaterana serasera izay natao tao amin'ny Foiben'ny Fikarohana Voina natao tao amin'ny Distrikan'ny Istanbul Metropolitan. [More ...]
Ho an'ireo izay mitady asa ao amin'ny Eskisehir, Estram Light Rail Systems, izay iray amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Kaominin'i Metropolitan amin'ny İŞKUR. Doka fandraisana fitantanana 48 no navoakan'ny. Raha ny voalazan'io fanambarana io dia farafahakeliny 1 taona [More ...]
Kocaelispor Derincespor fanampiny sidina avy amin'ny City Park ho an'ny Derby
Kocaeli Metropolitan Municipal TransportationPark dia hikarakara fanentanana fanampiny ho an'ny derby tanàna izay hiatrehan'i Kocaelispor sy Belediye Derincespor ao amin'ny Kocaeli Stadium ny alahady 9 febroary amin'ny 13.30. FIVORIANA AVY ANY KÖRFEZ MAKA 150 KS [More ...]